” သရဲ ( ၂ ) ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ” သရဲ ( ၂ ) ”
” သရဲ ( ၂ ) ”
Posted by YE YINT HLAING on Jun 15, 2012 in My Dear Diary |9comments
အလွမ်းနဲ့အိပ် အလွမ်းနဲ့စား အလွမ်းနဲ့ လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့ထံကိုသူမဆီကစာလေးတစောင် ရောက်လာခဲ့တယ်။ စာလေးထဲမှာ ” ကို့ ကို အရမ်း လွမ်းတယ် ” တဲ့။ ဒီစာလေးကိုနေ့ခင်း ထမင်း စားပီးချိန် မှာ ရခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ရုံးကို သွားပီးခွင့် တိုင် တယ်။ ခွင့် ပေး တဲ့ ဂျာကြီး က ပြုံးပြုံး ကြီး ကြည့် ပီး ” ဒီလို အချိန်ကြီး မင်း ဘယ်လိုသွား မှာလဲ ” လို့ မေးခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ။ မိုးအရမ်း ရွာ ထားလို့ တောတွင်း လမ်းတွေ ပျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေသလိုသွားမယ် လို့ ဖြေခဲ့တယ်။ ဂျာကြီး ကကျွန်တော် တို့ နှစ် ယောက် အကြောင်း သိသလို ကျွန်တော့ ကောင်မလေးကိုလည်းမြင်ဘူးတယ်။ သူက မှတ်ချက် ပေးခဲ့တယ် ” ရဲရင့်! မင်းကောင် မလေးက အချောလေးပဲကွ ! ” တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။။။ လူတိုင်း ဒီလိုပဲ ပြောခဲ့ကြတယ်။။။ ခု။။။ သူ။။။ ကျွန်တော့အ နားမှာ မရှိ တော့ပါဘူး။။။ ဘဝ ခြားခဲ့ပါပြီ။။။ ဘယ်လိုမှ ပြန်မဆုံ နိုင်တဲ့ လမ်းဆီကို သူ သွားခဲ့ပီ ဗျာ။ ( ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက် အကြောင်း လေး ကို ” မိုးက ပြော တဲ့ ချစ်ပုံပြင် ” ဆိုတဲ့ နာမယ် လေးနဲ့ ကျွန်တော် ရေးချင်ပါသေးတယ်။။။ ဒါပေမဲ့။။။ အခု ရေးမဲ့ အကြောင်း အရာ အပါအဝင်အားလုံးမှာ ကျွန်တော်နဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင် နေတဲ့သူတွေ အတွက် နေရပ်ဒေသနဲ့ အမည် အား လုံးကို ချန်လှပ် ရေးသားလိုက်ပါ့မယ် )
သိသိကြီး နဲ့ ကားကြုံ လိုက် လာရင်း လမ်းခွဲ ရောက် တော့ ည ( ၁ ) နာရီ ခွဲပီ။ ( ၃ ) နာရီ နီးပါး လမ်းလျှောက် ရမဲ့ ခရီး က ကျန်သေးသည်။ ကား ဆရာက အားတုံ့အားနာ နှုတ်ဆက်ရင်း ရေသန့် တဘူး ပေးခဲ့သည်။ သူမ အကြောင်း ကို တွေးရင်း လမ်းလျှောက်နေ ခဲ့သည်။ ဒီဒေသ က ကျွန်တော့ ဒေသ မဟုတ်။သို့သော် ခုနေ ကားကြုံ ဆိုင်ကယ် ကြုံ လေးများ ကြုံရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေး နေ စဉ် နောက်ကျော ဘက် အရပ် က ဆိုင်ကယ်သံ ကြားရသည်။ ( ၁ ) မိနစ်။။။ ( ၂ ) မိနစ်။။။ ( ၃) မိနစ်။။။ ( ၅ ) မိနစ်။။။ မျှော် သာ မျှော် ပေါ် မလာ သည့် ဆိုင်ကယ် ။ အသံကြား ရုပ် မမြင်မို့ သံသယ ဝင်လာပြီ။ ဘာလဲကွာ လို့ တွေးရင်း လမ်း ဆက်လျှောက်သည်။ ( ၁ဝ ) မိနစ် လောက် ကြာတော့ ဒေါသ ဖြစ် လာပီး ဘာမှ မမြင်ရတဲ့ ကျောဘက် လမ်း ပေါ်ကို ကျွန်တော် ခဲနဲ့ထုခဲ့သည်။ ” ဗျော။။။” လက်နဲ့ စုပ်ပစ် သလို ကျွန်တော် ရှိရာကို သဲ တွေ ခဲတွေ နဲ့ပြန်ပစ်သည်။ အဲဒီ အချိန် မှာ မျက်ရည် လည်ပီး ကြက်သီး ထခဲ့ရသည်။ ကြောက်ဒေါသ နဲ့တော့ ပြန်အော်သည်။ ” ဘာလဲကွာ ! ” ပေါ့။ ဆိုင်ကယ် သံ က ပိုကျယ်လာပီး ” ဝုန်း ! ” ကနဲ လဲကျ သံပါကြားလိုက်ရတယ်။ အသံ က နီးနီးလေး နဲ့ အကျယ်ကြီး ။။။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မမြင်ရဘူး။။။ နာမည် က ရဲရင့်လှိုင်။။။ အဲဒီ အချိန်က ပြေးလိုက်တာ မွှတ်နေတာပဲ။။။ အသက် ရှူ မဝလောက်အောင် မောလာမှ အပြေးရပ်တယ်။ စိတ်အင်အား တွေ သတ်တိ တွေ စုစည်း ပီး ပုံမှန်ပြန်လျှောက်ခဲ့တယ်.။ ” ဝုန်း ! ” ရှိသမျှ လိပ်ပြာ တွေ အကုန်လွင့်ကုန်တယ်။ လမ်းဘေးက ညောင်ပင်ကြီး ဆီက အသံ။။။ ဒါပေမဲ့။။။ ဘာမှ မမြင်ရဘူး။။။ ညောင်ကိုင်းကျိုး တာလား ဆိုတဲ့ အတွေး မှာ သက်သေမရှိဘူး။ ” လုပ်ကြကွာ ! ” အဲဒီလို အော်လည်းအော် ပြေးလည်းပြေး ပေါ့။ ချွေးတွေကိုနစ်လို့ ။ လိုရာ ခရီး အမြန်ဆုံး ရောက်အောင်ထင်ပါ့။ ဒီလိုနဲ့ ပြေး လိုက် သွားလိုက် လုပ်နေရင်း ” ဟာ။။။” ကျွန်တော် နဲ့ အပြိုင် ဘေး မှာ ပြေးနေ တဲ့ မဲမဲကြီး။။။ ကျွန်တော်မျက်လုံးမှိတ် အော်ပီး ပြေးတယ်။လဲကျ မလိုလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်လိုရာကို အမြန်ဆုံး ရောက်တယ်။ ကျွန်တော် တည်းနေကျ အိမ်ကိုပါ။ ” ဘယ်နေရာ။။။ ? ” ကျွန်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ အမျိုးသမီး က ဆိုင်ကယ် သံ ကြား တဲ့ နေ ရာကို မေးတယ်။ ပီးတော့ သူ့ ယောက်ကျား မျက် နှာကို ကြည့်တယ်။ ” ညီလေး ပြောတဲ့ နေရာ မှာ ပီးခဲ့တဲ့လ က ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားနဲ့တိုက်ပီး ဆိုင်ကယ် သမား ဂေါင်း ကျေ ပီး ပွဲချင်းပီး သေသွားတယ်” “ဟုတ်တယ်! အဲဒီ ကောင်မသေ ခင်က အရမ်း ဆိုးတယ်။ အိပ်ဇော ဖြုတ် ထား တဲ့ သူ့ ဆိုင် ကယ် သံ ကြောင့် အငယ် မ လေးဆို လန့်လန့် နိုးတယ်။” ” ညီလေး ပြောတဲ့ ညောင် ပင် က ဒို့ရွာ မှာ နာ မည် ကြီး ပေါ့ ကွာ။ ညောင်ပင်နောက်က အခင်း ပိုင် ရှင် သမီး က အဲဒီ ညောင်ပင် မှာ ကြိုးစွဲချ သေသွား တာကွ။ အေး ။။။ မင်းပြေး သလို လိုက် ပြေး တဲ့ နေ ရာကလည်း တိုက် ပွဲ တွေ အကြီး အကျယ် ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ နေရာပဲ။ နောက်အချိန် မတော် တယောက် တည်း မ လာ ပါနဲ့ကွာ။ ပီးတော့ ဒို့ နေ ရာ က အညို ရောင် နယ်မြေပါ ။” သူမ နဲ့တွေ တော့ လည်း ဒီအကြောင်း ကို ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ မျက်ရည်အဝိုင်း သား လေးနဲ့နား ထောင် ပီး ” ကို ရယ်။။။ နောက်ဆို အချိန်မတော်ကြီး တယောက် တည်း သွားတာ လာတာ မလုပ်ပါနဲ့” တဲ့။
သရဲ ( ၁ ) ကို အားပေးခဲ့ သူတွေ ကော ကွန်မန့်ပေးတဲ့ သူတွေကော ထပ်ပီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ သရဲ အ ကြောင်း ရေးရင်း ကြောက်စိတ် မဝင်မိပဲ တခြား စိတ်ခံစားမှူ့ တခုက ရင်ထဲ ရောက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကြောက်စရာ မကောင်းခဲ့ရင် ခွင့်လွတ်ပေးကြပါဗျာ။
ခဲ နဲ့ ထု ရင် သဲနဲ့ပက်မယ် ဆိုတဲ့ သရဲမျိုးပေါ့နော်
မိုးကပြောတဲ့ ချစ်ပုံပြင်လေးလဲ ရေးပေးပါအုန်း။
ကိုရဲက သရဲအကြောင်းရေးရင်း ချစ်ချစ်ကို သတိရသွားတယ်ထင်ပါ့..စိတ်မကောင်းလှပါဗျာ..
သဂျီး မြန်မာနိုင်ငံလာရင် အဲဒီညောင်ပင်အောက်ကို အမဲသားတစ်ထုတ်နဲ့တစ်ယောက်ထဲ လွှတ်ပေးလိုက်ဖို ့မမေ့နဲ ့ဦး
ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ ” မိုးက ပြော တဲ့ ချစ်ပုံပြင် ” ဆိုတာလေး စောင့်နေမယ်နော်….
အခုပို.စ်ကိုဖတ်လိုက်ရတာ သရဲခြောက်တဲ့အကြောင်းထက် ကိုရေလို.ခေါ်ပြီး မျက်ရည်လေးဝဲပြီး နားထောင်ပေးနေတဲ့ ဘဝခြားတဲ့ချစ်သူ လေးနဲ. စကားပြောနေတဲ့ ကိုရဲရင်လှိုင်ရဲ. ခံစားမှုအတိုင်း ခံစားလိုက်ရပါတယ်…
ညက အလုပ် ၂နာရီ ကျော်မှပီးတယ်။ အခန်းပြန်ရောက်တော့ သရဲ ( ၂ ) ထိုင်ရေးနေမိတယ်။ ပီးတော့ ပို ( စ ) တွေ ကွန်မန့် တွေ ဆက် ဖတ်တယ်။ မိုးကိုလင်းရော။ ဂေဇက်က ဖတ်လို့ မကုန် စာအစုံစုံပဲဗျို့။ ကျွန်တော့ ပို့ ( စ ) လေး ဖတ်ပေးတဲ့အ တွက် ကျေးဇူးပဲဗျာ။
အာ……. မိုက်တယ်ဗျို့ ……. ။
အချစ်အတွက်ဆို အရာရာ ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ် ……. လုံးဝ မိုက်တယ် …… ။
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ …. ချစ်သူကို တွေ့ချင်တာက တွေ့ချင်တာပေါ့ …. ခရီးမထွက်သင့်တဲ့ အချိန်မှာတော့ .. စွန့်စားမှုပြုတာ …. အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ် ။
တွေ့ချင်တဲ့စိတ်ကို … စိတ်လေး နည်းနည်းရှည်ထား သီးခံလိုက်လျှင် ပိုပြီး အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့ ။
တော်သေးတယ် ကြောက်တတ်လွန်းတဲ့ လူဆို တက်သေနေလျှင် … ချစ်သူလည်း စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး … ။
တုုံးတိုက်တိုက် ၊ ကျားကိုက်ကိုက်ချစ်မယ့် လူမျိုး ရတာတောင် အခုတော့ ဘဝခြားခဲ့ပြီ အနားမှာ မရှိတော့ဘူးတဲ့လား … စိတ်မကောင်းလိုက်တာ … ။ ဘဝခြားတယ်ဆိုတာ … သူသေသွားတာလား ၊ ရှင်လျှက်လမ်းခွဲခဲ့တားဟင် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို … သက်ဆုံးတိုင်ပေါင်းဖက်စေချင်ပါတယ် ……
ရေးချင်တယ်ဆို တာ ထက် ပြောချင်တယ် လို့ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့် မယ်ဗျာ။” မပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ သူတွေဟာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေလို ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို စကားမပြောပဲ ပေခံနေလို့ဗျ ” ဂေဇက်က အားလုံးကို စကားပြောခွင့်ပေးထားလို့ ဂေဇက် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ခုတော့ အိပ်လိုက်ဦးမယ်။ ညနေ ပါတီ လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောလို့ က ဖို့ အားရှိအောင်အိပ်လိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်တော်က တဲ့ မြန်မာ ဒီဂျေ အကကို ဒီကဘော်ဘော်တွေ သဘောကျ သဗျ။( အမှန် က မူးလို့ သူများကသလို လျှောက်ကခဲ့တာ )။
အားပေးသွားပါတယ်ဂျင့် “ မိုးက ပြော တဲ့ ချစ်ပုံပြင် ” ကိုလည်းမျော်နေပါဂျောင်း….
ွှအမလေး…သတိ္တကောင်းလိုက်တာ။ အဖော်လည်းမပါပဲ တစ်ယောက်တည်းနော်။ လိုရာခရီးကိုရောက်လို့
တော်သေးတယ်။ လမ်းမှာရှုးတွေဘာတွေရောထွက်ကျခဲ့သေးလား ?? အဟီး… နောက်တာနော်။